ILifa leMveli kwiNdawo yaseWaterfront Kufuphi nayo yonke into. - I-Airbnb
ILifa leMveli kwiNdawo yaseWaterfront Kufuphi nayo yonke into.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguDeb
Hamba ngeengcango zaseFransi ezikhokelela kwi-balcony yangasese ukuze ubuke iimbono ze-Harbour Bridge kweli khaya lelifa lemveli lihlaziyiweyo. Eqaqambileyo, eyonwabileyo kunye ne-pastel-toned, amagumbi ahlulwe ngokutyibilika kweengcango zeglasi kunye needrape ezinzima zobumfihlo.
Igumbi lokuhlala litshintshela kwigumbi lokulala lesibini elinesofa enkulu emile okwe-L enebhedi ekhululekileyo yokumkanikazi ukuba iyafuneka.
“Yonke into emnyango wakho. Indawo efanelekileyo yeholide yakho okanye uhambo lweshishini.”
- Deb, umbuki zindwendwe wakho
Iigeyithi zokukhusela usana
4.87 (iingxelo zokuhlola 152)
Ithafa ilele eBalmain, kufutshane nezinto ezininzi eziluncedo, kubandakanya iiferi, iibhasi zokutyela kunye neendawo zokutyela. Kufuphi ne-Darling Harbour, Pyrmont, kunye nesixeko, ikwayingcango ezimbalwa ezantsi ukusuka kwiHotele yaseLondon, ebamba eyona ndawo ibalaseleyo ye-steakhouse.
Umgama ukusuka eSydney Airport
I look forward to welcoming y…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-4645-3
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Balmain